रिजल्ट सिमित अवधीको परिणाम हो, लाईफ प्रथम हुने शिक्षा चाहिन्छ’ | Janaandolan
Home Featured2रिजल्ट सिमित अवधीको परिणाम हो, लाईफ प्रथम हुने शिक्षा चाहिन्छ’
रिजल्ट सिमित अवधीको परिणाम हो, लाईफ प्रथम हुने शिक्षा चाहिन्छ’
शिक्षालाई प्रमाणपत्रमुखी भन्दा पनि परिणाममुखी शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिंदै विगत चारवर्षयता प्राविधिक शिक्षा अन्तरगत डिप्लोमा सम्मको कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका झापाका युवामध्ये आलोक कार्की एक हुन् । अहिलेसम्म सञ्चालनमा रहेको परम्परागत शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गरी समयानुकुल सार्थक शिक्षा प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिने कार्की विर्तामोडस्थित इष्टन इम्पायर होटल म्यानेजमेन्ट कलेजका अध्यक्ष हुन् । यसका अतिरिक्त एसेन्ट (Ascent) एकेडेमी चारपानेका सञ्चालक हुन् भने प्राविधिक विषय शिक्षण गर्ने नेपालभरका संस्थाहरुको छाता संस्था NVIA (नेपाल भोकेसनल इन्स्टिच्युट एलायन्स)–को महासचिवको जिम्मेवारीमा पनि छन् । यिनै जिम्मेवारी सम्हालीरहेका कार्कीसंग शिक्षा क्षेत्रसंग सम्बन्धित रहेर गरिएको कुराकानीको सार संक्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः – सं
कोरोनाले शैक्षिक क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
– कोरोनाले विश्व नै प्रभावित भएको अवस्था हो । लगभग १५५ देखि १६० वटा देशका शिक्षण संस्थाहरु ठप्प छन् । भर्खरै आएर केहीले खुलाउँदैछन् आ–आफ्नै तरिकाबाट । नेपालमा पनि शैक्षिक शत्रको ६ महिना त्यसै वितिसकेको छ । यो अवधीमा एउटा हिसावले शिक्षाक्षेत्र ठप्प नै छ । तर सरकारले अनलाइन शिक्षालाई पनि मान्यता दिएका कारण कतै कतै आफ्नै बलबुताले अनलाईन कक्षाहरु चलाइएको अवस्था पनि छ । यो परिवेशमा विगत एक/डेढ महिना, दुईमहिना, तीन महिनायता विद्यार्थीले अनलाईन शिक्षा लिएरहेका पनि छन् । तर हाम्रो देशका केही भू–भागहरु यस्ता पनि छन् कि कतिपय ठाउँमा विद्युतकै पनि एकदमै समस्या छ । इन्टरनेटको एक्सेस नै छैन, वाइफाईको त के कुरा डेटाको पनि संभावना छैन । विद्युत नभएका र डेटासमेत नभएका ठाउँका नानीहरु एकदमै समस्यामा छन् । अब यी सबै कुरालाई एकठाउँमा राखेर समीक्षा गर्दा विश्वसहित हाम्रो देशमा प्रि–प्राइमरीदेखि कलेजसम्म सबै तहका विद्यार्थीलाई असर पारेको छ । ६ महिना स्कूल कलेजबाट विद्यार्थी टाढा हुनु भनेको असहज परिस्थिति नै हो । यति लामो समय शैक्षिक संस्था बन्द भएको अहिलेसम्म हामीले कहिल्यै भोग्नु, देख्नु त के सुनेका पनि थिएनौं । यस्तो परिस्थितिको कल्पना सम्मपनि थिएन । बन्द हुन्थ्यो, स्ट्रयाक हुन्थ्यो यतिको जटिलता कहिले पनि देखिएको थिएन ।
अब हाम्रो संस्था इकोहम (ECHOM)–को कुरा गर्दैगर्दा तेस्रो महिना कटेर चौथो महिना लाग्दै गर्दा हामीले अझै यो क्राइसिस केही समय बढेर जाने महसुस ग¥यौ र अनलाइन कक्षा प्रारम्भ गर्यौं । धेरै स्कूलले अनलाईन कक्षा सञ्चालन गर्दैगर्दा धेरै विद्यार्थीहरु सहभागी हुन नसकेको अवस्था पनि बुझियो । तर, हाम्रोमा एकदमै उत्साहजनक सहभागिता रह्यो । अहिलेसम्म हाम्रोमा ८०देखि ८५ प्रतिशतसम्म सहभागिता अनलाइन कक्षामा रहेको छ । यसले हामीलाई उत्साह थपेको छ, खुशी पनि लागेको छ । तीनमहिना पछिदेखि हामीले अनलाईन कक्षा सञ्चालन ग¥यौं । अनलाईन शिक्षामा सबै कुरा त सम्भव हुँदैन, कक्षामा एउटा टिचरको अगाडि बसेर पढ्नु र एउटा स्क्रिन, रेडियो वा टिभिको अगाडि बसेर पढ्नु फरक नै हुन्छ । यद्यपी हुँदै नहुनु भन्दा केही हुनु राम्रो । भनिन्छ नी ‘नहुनु मामा भन्दा कानो मामा जाति ।’ हुन त यसरी नै सधैं जानुपर्छ भन्ने होइन । अप्ठ्यारोमा छौं भने केही न केही उपाय त खोज्नै पर्छ ।
विभिन्न स्कुल कलेजले सञ्चालन गरेको अनलाईन कक्षामा २५ देखि ३० प्रतिशतमात्र सहभागी भएका बेला तपाइहरुकोमा चाहिं ८०/८५ प्रतिशत विद्यार्थी सहभागिता कसरी संभव भयो ?
–तपाईको प्रश्नले यहाँ पढ्ने नै सबै विद्यार्थी सुगम अर्थात शहरी क्षेत्रका मात्रै छन् कि भन्नेतर्फ इङ्गित गरेको हो । तर, त्यस्तो अवस्था होइन । इलामका विद्यार्थी छन्, तर सदरमुकामका मात्र होइन एकदमै विकट ठाउँका विद्यार्थी पनि छन् । त्यस्तै झापाकै पनि बाहुण्डाँगीको माथिल्लो भेगदेखि झापाकै तल्लो भेगका पनि छन् । जस्तो बाहुनडाँगीदेखि भित्र ग्रामीण भेगका विद्यार्थी छन् जहाँ वाईफाईको त कुरै भएन डेटा पनि टिप्दैन । त्यतिमात्र होइन, कतिपय नानीहरुका अभिभावकसंग स्मार्ट फोनसम्म नभएको अवस्था पनि छ । यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रा नानीहरुका अभिभावकसंग इन्डिभिज्युल्ली फोन गर्यौं । ८० प्रतिशत सहभागिता त्यत्तिकै पुगेको होइन, त्यसका लागि मेहनत पनि गरेका छौं । हरेक अभिभावकसंग सल्लाह लियौं । तर हामीले उहाँहरुलाई बुझाउन खोज्यौं । जस्तो दुईदशक अघिसम्म कति टाढासम्म कस्तो बाटो हिडेर स्कूल जानुपर्ने अवस्था थियो, पुल थिएन, बाटो थिएन, डोरीमा झुण्डिएर, ओल्लो डाँडाबाट पल्लो डाँडा हिडेर स्कूल पुग्थे । त्यो बेला हामी आँगनमै स्कूल, घरैमा बाटो खोजेर सम्भव थिएन । त्यस्तै अहिले पनि सबैको घरमा इन्टरनेट, स्मार्टफोन, ल्यापटप सम्भव हुँदैन, सबैलाई इकोनोमिक एक्सेस पनि हुँदैन । तर यस्तो अवस्थामा विकल्प खोज्नुभन्दा अरु उपाय पनि हुँदैन । यस्तो अवस्थामा छिमेकीसंग होला, आफन्तसंग सहयोग माग्दा केही समय चलाउन दिनुस् भन्दा हाम्रो समाज त्यति सारो सहयोगै गर्न नसक्ने त होइन, छैन । हामीले यी सबै समस्या बुझेर, त्यसमा हाम्रो तर्फबाट के सहयोग गर्न सक्छौं समीक्षा गरेर अभिभावकलाई कन्भिन्स गराएर अनलाइन क्लासमा ८० प्रतिशत प्लस राख्न सकेका हौं ।
अनलाइन शिक्षा सञ्चालन, शिक्षक कर्मचारीलाई तलबको ब्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ ?
– यो कुरा बुझाउन पनि जरुरी छ । सबभन्दा पहिलो कुरा त एकमुष्ट फि अलमोष्ट कुनै पनि शैक्षिक संस्थाले लिंदैलिंदैन । हामी पनि त्यसरी नै चलेका छौं । विद्यार्थीबाट शुल्क लिने भनेको मासिक वा किस्ताबन्दी नै हो हामी पनि त्यसरी नै लिन्छौं । हामी पनि समस्यामा नै छौं । फरक यति हो कसैले आँसु झारेर देखाउँछन्, कसैले दुःखमा पनि हाँसेर हिंडेका हुन्छन् हामीपनि त्यसैमा छौं । हाम्रो कलेज र स्कूलमा ४० देखि ४५ जना तलवी कर्मचारीहरु छन् । स्कुल र कलेज दुवैको आफ्नो भवन होइन यसको पनि भाडा नै तिर्नुपर्छ, विर्तामोड एरियाको भाडा अवगत नै छ कति चर्को छ भन्ने कुरा । दोस्रो कुरा संस्था चलोस् वा नचलोस् हरेक कर्मचारीको चुलो त बल्नै पर्छ, केही कर्मचारी त यस्ता पनि हुनुहुन्छ, यहाँमात्रै काम गर्नुहुन्छ, यहाँबाट जे आर्जन गर्नुभो त्यही मात्र आयस्रोत हो । यस्तो अवस्थामा हामीले हामी सक्दै सक्दैनौं भन्ने अवस्था पनि विकल्प रहँदैन । तथापि हामीले अहिले सबैलाई पुरै त दिन सकेका छैनौं ।
तर, कर्मचारीको निकट बसेर उहाँहरुको समस्या जटिल हुँदा रिक्वायरमेन्ट अनुसार केही न केही सहयोग गर्दैछौं । संगसंगै घरवेटीहरुलाई पनि यही रिक्वेष्ट गर्र्दैछौं, केही दियौं, केही महिनाको ड्युमै छ, केही महिनाको उहाँहरुले छुट पनि गर्नुभएको छ । फेरि पनि उहाँहरुलाई धन्यवाद । लकडाउनकै भएको ६ महिना भइसक्यो । केही स्यालरी पनि खुवाउँदैछौं भाडा पनि तिर्दैछौं । यसो भन्दै गर्दा र हाम्रो हामी संस्थापकको पाटोबाट सम्झिँदाखेरी हरेक महिना फि समयमै उठ्छ भन्ने हुँदैन, सामान्यतया जाँचको बेला अलि बढी फि उठ्छ । यो पटक जाँच आउनु अगाडि नै लकडाउन भयो । हामी पहिले नै निकै डेफिसेटमा थियौं, यहाँ छ महिना आइसक्यौं, भाडा पनि तिर्दैंछौं, कर्मचारीलाई तलब पनि खुवाउँदै छौं, तर, हामीलाई आयआर्जन छैन, टोटल नेगेटिभमा छौं । तै पनि एउटा भनाई छ ‘मर्ता क्या नही कर्ता’ यस संकटमा जसरी पनि संस्था बचाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौं ।
अनलाईन कक्षा सञ्चालनका सन्दर्भमा मैले अघि नै भने केही तलब खुवाइरहेका छौं । यसमा शिक्षक कर्मचारीको पनि सहयोग छ । जसरी अभिभावकले आफू भोकै सुतेर पनि बच्चालाई त खुवाएरै सुताउन चाहन्छ, हामी पनि त्यही अवस्थामा छौं । एउटा समय आउँछ त्यो बेला हामीले पनि रिक्वेष्ट गर्नुपर्छ । त्यो बेला उहाँहरुले पनि बुझिदिनु हुन्छ भन्ने आशा गर्छु । यो समयसम्म हामीले अभिभावकलाई केही पनि भनेका छैनौ । यो कुरा उहाँहरुले पनि बुझ्नु पर्छ, अभिभावकहरुले बुझिराख्नु भएको छ ।
शुरुमा एकैपटकमा सबै विषय अनलाईन कक्षामा पढाउन सम्भव थिएन । नानीहरुमा बानी पनि परेका थिएनन् । तर अहिले विद्यार्थीले पाँचवटै विषय कहिलेदेखि पढाई हुन्छ भनेर सोधिरहेका छन् । यसै हप्तादेखि हामी सबै विषयको अनलाईन कक्षा गराउँदै छौं ।
परीक्षा भयो कि छैन ?
Eaxm हुनुभन्दा हप्ता/दशदिन अगाडिदेखि लकडाउन भयो । त्यसैकारण हामीले फिजीकल्ली भ्बहm लिन सकेनौं । यो एडभान्स डिप्लोमाको कुरा हो । फिजीकल्ली Eaxm लिन नसकेपछि परीक्षा बोर्डबाटै अनलाइन परीक्षा लिइयो । + २ को हकमा त अहिलेसम्म कसैको पनि Eaxm भएको छैन ।
अनलाईन परीक्षा कत्तिको विश्वसनीय हुन्छ ?
– नानीहरु स्कूल कलेजमै आउथे । प्रत्यक्ष परीक्षा दिन्थे । अहिलेसम्मको ट्रेन त्यही थियो । अचानक अहिले घरैमा बसेर परीक्षा दिनुपर्ने भयो । यस्तो अवस्थामा परीक्षामा ऋयउष्म होला कि भन्ने चिन्ता एक पाटोबाट ठिकै हो । तर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिं छ महिना वा एवर्षको परिणाम नै रिजल्ट हो । निश्चित अवधीको ज्ञानलाई उत्तरपुस्किामा लेखेर पाइएको प्राप्ताङ्क हो । विद्यार्थी कति जान्ने, उसको क्यालीवर कति भन्ने कुरा त्यसले निर्धारण गर्ने होइन । विद्यार्थीको क्षमता जाँच्ने परीक्षा एउटा माध्यम हो, तर कम्प्लिट माध्यम होइन । व्यक्तिको क्षमता सधैंभरी एकै प्रकारको हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । A+ल्याएको विद्यार्थी सधैं त्यही स्थानमा रहन्छ भन्ने हुँदैन । मेहनत ग¥यो भने C+ले पनि A+ लाई जित्न सक्छ । सर्टिफिकेट केही समयको Outcome हो । तर,Life को Outcome होइन । हाम्रो एजुकेशन सिष्टमले यस्तो बनाइदिएको छ की– परीक्षामा प्रथम नै हुनुपर्छ । त्यो भएर नानीहरु पनि परीक्षामा पनि फस्ट नै हुने भन्ने मानसिकताबाट हुर्केका छन् । फस्ट लाइफमा हुने हो । परीक्षा निश्चित समयको प्राप्ताङ्क मात्र हो ।
शिक्षा प्रणाली र परीक्षा प्रणाली कस्तो छ ?
– मैले पढेर, देखेर र जे भोगेर आएँ अहिले म त्यहि गर्दैछु । यसो भन्दै गर्दा समाजका भौतिक संरचनाहरु परिवर्तन भए । घरका छाना, रेडियो टि.भी.बाट स्मार्ट फोन हुँदै प्लाज्मा टिभीतिर गइसके, हिजो खुट्टाले हिड्थ्यौ साईकल, मोटरसाइकल हुँदै करोडौंका गाडीमा चढ्ने भएसके मान्छे । यसरी हेर्दा हिजो समाजको बनोट जस्तो थियो, त्यसमा परिवर्तन भएको छ । तर, हाम्रो शिक्षा कहाँ छ ? यसो भनिरहँदा शिक्षा क्षेत्रमा केही भएको छैन होइन । शिक्षाका पनि भौतिक संरचनाहरु परिवर्तन भएका छन्, शिक्षक फेरिए, विद्यार्थी फेरिए, भौतिक संरचना फेरिए । त्यसलाई शिक्षा क्षेत्रको परिवर्तन त मान्न मिल्दैन । मैले यो बोलिरहँदा हुँदै नभएको भन्ने अर्थ नलागोस् । फेरि पनि हुँदै नभएको होइन, तर, सिमित र सेलेक्टिभमा भएको परिवर्तनलाई सम्पूर्ण शैक्षिक परिवर्तन मान्न सकिन्न । दोस्रो कुरा हाम्रो शिक्षा कस्तो हुँदै आयो भने त्भबअजभच पनि ड्युटीमा जाने मात्र हुनु भो, स्कूल गइदिने र निश्चित समय पढाइदिने, विद्यार्थी पनि सुनिदिने, शिक्षकले होमवर्क दिने विद्यार्थीले गरेर ल्याइदिने, अनि स्कूलमा बुझ्न पाएन भने बाबु आमाले ट्युसन पढाइदिने र विद्यार्थीले पढिदिने, यसरी हेर्दा पढिदिने पढाइदिने, गरिदिने, गराइदिने प्रणाली छ । यसमध्ये केही अपवादमा राम्रो मेहनत गरेर पढाउने त्भबअजभच हरु पनि हुनुहुन्छ । तर हामी यहाँ समग्र शिक्षा प्रणालीको कुरा गर्दैछौं, यो एउटा कोषको मात्र कुरा होइन सम्पूर्ण शैक्षिक प्रणालीको कुरा हो ।
विद्यालयमा शिक्षकले नपढाएर नानीहरु खत्तम भए भनिन्छ । त्यो होइन । बालबालिकाको पहिलो शिक्षा घरैदेखि शुरु हुन्छ, घर–परिवारको वातावरणमा भर पर्छ । बच्चाले पारिवारिक इन्भाइरोमेन्टको सिको गरिरहेको हुन्छ । त्यसपछि मात्र बच्चा स्कूल गएर विषयगत शिक्षा लिन थाल्छ । त्यसपछि शिक्षकको आचरण, लवाई, खुवाई, हिंडाई, बोलाईको सिको गर्दै जाने हो । बच्चाले किताव र कितावमा लेखेका कुरा खाने होइन । जसरी घरको वातावरणमा सिकेको हुन्छ त्यसरी नै स्कूलमा पनि सिकाई अभ्यास गर्दै जाने हो । एउटा नानीले किताब बाहिर पनि धेरै कुरा सिकेको हुन्छ–जुन पढाई होइन । सिकाई (एडजब्सन) हो । हामी किताबको ज्ञानलाई मात्र पढाइ मान्छौं । अब यस्तो पढाउने शैली फेरिनुपर्छ । ‘एप्लाइड स्टडिज एप्लाइड टिचिङ’ हुनुपर्छ । थ्यौरीकल पढाईसंगै त्यसको प्राक्टिकल इम्प्लिमेन्टेसन खोजिनु पर्छ । अब खाली ए प्लस बीको होल स्क्वायरको फर्मुला सोधेर मात्र हुँदैन । त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन कहाँ छ ? खोज्न सिकाउनुपर्छ । खाली पढाइदिने र पढिदिने ड्युटीले उपलब्धी दिन सक्दैन । ज्ञानका लागि पढ्नुपर्छ । जाँच भनेको सर्टिफिकेट हो तर, सर्टिफिकेट ज्ञान होइन । त्यसका लागि शिक्षकहरु रुपमा नभइ पढाईको प्रस्तुती शैली, विषयवस्तुमाथिको दक्षता, बच्चालाई आकर्षक गर्न सक्ने क्षमता भएको हुनुपर्छ–जबकी नानीहरुलाई क्लासमा जाउँ जाउँ लागोस् । बच्चाहरु शिक्षकका लागि, साथीका लागि बुबा आमाका लागि स्कूल कलेज जाने होइन, ज्ञानका लागि जानुपर्छ भन्ने हुनुपर्छ ।
किताब भन्दा अरु पढाइ नै होइन भन्ने मान्यताले सर्टिफिकेटलाई मात्रै आर्जन मान्ने चलन छ हामीकहाँ । बच्चामा रहेको अरु क्षमता र रुचीलाई उपलब्धि मान्ने सोच नै छैन । त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्न जरुरी छ । अब कितावमा मात्र गरेको प्रगतिले हुँदैन । उनीहरुको रुची, क्षमता अनुसार सिष्टमेटिक तरिकाले फिजिकल एक्टिभिटिज, स्पिच लगायतका विषयहरुलाई पनि सिष्टमेटिक तरिकाले विषयबस्तु बनाएर अघि बढाउनुपर्छ । हरेक बच्चामा रहेको क्षमता खुट्याउन सक्नुपर्छ । यो कुरालाई ‘वर्क आउट’ गर्नुपर्छ । खाली नानीहरुलाई स्मार्ट बन भनेर मात्र हुँदैन, स्मार्ट बन्ने तौरतरिका सिकाउनु पर्छ । अनिमात्र हाम्रा नानीहरुले विश्वमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छन् । इकोहममा यी कुराहरुलाई समावेश गरेका छौं । पढाइमा फस्ट हुनु राम्रो हो । तर, सबै कुरा त्यो होइन । भोली उ कहाँ पुग्ने, कसरी पुग्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
विद्यार्थीलाई बाहिर पनि पठाउने गर्नुभएको छ ?
– इकोहममा दुईवटा फरक धार छन् । यहाँ +२ एनविडि (नेपाल एजुकेशन बोर्ड) बाट पढाइ हुन्छ । अर्को एडभान्स डिप्लोमा, यसमा स्कटिज क्वालिफिकेसन अथोरिटीज मातहतबाट सर्टिफिकेट प्राप्त हुन्छ । यी दुईधारमध्ये कक्षा ११/१२ सरकारले जुन नीति नियम राखेको छ, त्यही अनुसार चल्छ । ११/१२ सकेपछि विद्यार्थीहरु फरदर स्टडिजका लागि तयार हुन्छ । हाम्रोमा +२ र एडभान्स डिप्लोमामा हुने विषय मिल्छ । एडभान्स डिप्लोमामा थ्यौरी र प्राक्टिकल दुवै पढाइ हुन्छ । १५ महिना थ्यौरी र प्राक्टिकल पढाइसकेपछि विद्यार्थीलाई नेपाल–भारतका चारे होटलदेखि विभिन्न देश (दुवई, बहराइन, न्यूजिल्याण्ड, माल्दिभ्स, चाइना ६ महिना तालिमका लागि पठाउँछौं । त्यो तालिम सकेपछि कति सर्टिफिकेट आउँछ । र अर्कोतिर प्रक्रिया अघि बढाउँछन् । कति फरदर स्टडिजमा पनि लाग्छन् । ६ महिना तालिम सकेर आएका नानीहरुको हकमा भने जागिर (Job) का लागि हामीले जोड्ने (पुल)को काम गर्छौं । किनकी उनीहरुसंग होटलको लिंङ्क हुँदैन । हामीसंग लिङ्क हुन्छ । तिनैमध्ये पनि कतिले उतै कन्ट्याक अवधी बढाएर बस्छन् भने विद्यार्थीको क्यापासिटी विचार गरेर कलेजले डाइरेक्ट २ वर्षका लागि जबमा पठाएको अवस्था पनि छ । समग्रमा एडभान्स डिप्लोमा कोर्ष यस्तो कोर्ष हो प्राक्टिकल नलेज (भोकेसनल ट्रेनिङ लिएर) पनि घर चलाउँछु परिवार धान्छु, भन्नेले आय आर्जन गर्न सक्छ । जब गर्दागर्दै माथिल्लो तहको पढाईलाई निरन्तरता दिन्छु भन्नेका लागि पनि सहज छ ।
इकोहमका नया“ योजना पनि केही छन् कि ?
–यो वर्षदेखि हामी डवल कोर्ष शुरु गर्दैछांैं । +२ र एडिएचएमको क्लास एकैचोटी हुन्छ । +२ मा पनि होटल म्यानेजमेन्ट नै हो । धेरैजसो विषय मिल्छ । एक/दुई वटा एक्स्ट्रा विषय समायोजन गर्दा एउटै कक्षा कोठामा बसेर दुवै विषय पढिसक्न पाउँछन् । यसले एक त समयको सदुपयोग भयो । अर्को चाँहि सिधैं जागिरमा लाग्ने बाटो खुल्छ । +२ ले मात्रै इन्टरनेशनल परिवेशमा ‘जब’ पाउने संभावना कम हुन्छ । तर ADHM गरेपछि सहजै जब पाउन सकिन्छ । यसले उनीहरु आफैं इन्डिपेन्डेन हुन्छन् । काम गर्दै आफैं खर्च जुटाएर पढ्न सक्छन् । अमेरिका, अष्ट्रेलिया जहाँ गएपनि भौतारिनु पर्दैन । पढ्नका लागि आर्थिक व्यवस्थापनको चिन्ता पनि कसैलाई भएन ।
कति विद्यार्थी बाहिर गए वा यहीं रोजगार भएका छन् ?
–यहाँ पढाइ सकेर विद्यार्थी जाने बाहिर नै हो । कोर्ष सकेर तालिमका लागि बाहिर नै जान्छन् । कति उतै बस्छन् कति फर्किन्छन् । कति आएर रि प्रोसेस गरेर हामी मार्फत नै जान्छन् । लगभग २०० विद्यार्थी बाहिर गइसकेका छन् । यो लकडाउनले कति फर्केर पनि आए । तर, खुशीको कुरा नै भन्नुपर्छ–निन्दा पूर्वमा खुलेको तारे होटलमा ५० प्रतिशत स्टाफ यहाँ पढेका स्टुडेन्ट छन् । यो हाम्रा लागि खुशीको कुरा हो ।
Previous articleविकास भन्दा आफ्नै सुविधातर्फ गाउँपालिका, स्थानीयद्वारा व्यापक आलोचना
Next articleकांग्रेस आमन्त्रित सदस्यमा ६ मनोनित
Featured2रिजल्ट सिमित अवधीको परिणाम हो, लाईफ प्रथम हुने शिक्षा चाहिन्छ’